Yintoni entsha kwi-AutoCAD ws 1.2 -Geofumadas
Ikhaya/Apple - Mac/Okubuyisa i-AutoCAD ws 1.2
Apple - MacAutoCAD-AutoDeskezintshayokuzonwabisa
Okubuyisa i-AutoCAD ws 1.2
Inguqu ye-1.2 ye-AutoCAD 2011 WS ikhishwe, oko sicelo esihle I-AutoDesk yamahhala evumela ukuba usebenze kwi-intanethi nakumadivayisi eselula.
Luphuculo olukhulu, nangona inguqulelo yeselfowuni isalele ngasemva kuyo yonke into eyenziwayo kwi-Intanethi. Ezi zincedisi zibandakanya:
Ukuxhaswa kwezakhiwo. Okona kungcono, ngaphambi kokuba usebenze kuphela kwindawo yokusebenza, kodwa ngokudityaniswa kweetemplate zokuprinta unokufumana okuninzi kunikezelo lweemveliso zokugqibela.
Ezininzi iilwimi Ngoku amaTshayina, amaFrentshi, amaJamani, amaTaliyane, amaJapan, amaKorea kwaye ngokuqinisekileyo iSpanish nesiPhuthukezi ziyaxhaswa. Ngokoluvo lwam, esi sicelo siza kusasazeka kakhulu kwaye i-AutoDesk iya kuthatha indawo yokuma kwayo ukuze isebenzise usetyenziso lweselfowuni kuba akukho mntu ukhe wanobuganga kweli nqanaba. Hayi simahla kwaye nesabelo esikhulu kangaka sentengiso.
I-snent Oku kuhle, ukuze ungenzi iimpazamo ekubetheni indawo apho ungenako ukulawula ngokufanelekileyo xa usebenzisa iminwe yakho -okanye izipikili-, ibhola elincinci kwandiso kwaye lisibonisa kwi-fly fly how look will look.
Kopisha / unamathisele. Ayisiyonto intsha le, kwaye enyanisweni phantse akukho nanye kwezi ekwi-intanethi. Kodwa kwinqanaba lethebhulethi izinto zinjalo, kundithathe umhlaba ukuba ndiqhele ukusebenzisa iminwe emibini ukuhamba kwiqonga leglasi. Kodwa ekupheleni kwendlela ndiyaphumelela, kwaye umbono wokuyenza ngendlela ebonakalayo ayilibaleki.
Ukongezelela, umdwebo wamahhala, owaziwayo Brush, ukwenza izichazi. Kwaye akukho phuculo lubaluleke kangako, nakwiiAnglo-Saxons IiNgesi.
Ngoko, vula iTunes kwaye ulayishe ukuhlaziywa ...
Apha ungakubona usebenza
AutoCAD 2012 nini?
Ukungalungi, mhlawumbi inguqu elandelayo.
Sawubona, ingaba kukho naziphi na iindlela zokufumana iinqununu zokuphumeza kwisayithi? Ndiya kuba luncedo kakhulu.
Iimagazini ze-3, ii-10 ze-geofumadas ezintsha ze-Agasti